‘सहकारीमा एकलौटी प्रवृति देखिएको छ’ | Nepal's No.1 Co-operative News Portal
Home अन्तर्वार्ता [Interview] ‘सहकारीमा एकलौटी प्रवृति देखिएको छ’
नेशनल को-अपरेटर्स ‍एलाईन्स प्रजातान्त्रिक समाजबादमा विश्वास राख्ने सहकारीकर्मीहरूको साझा संगठन हो । नेपालको सहकारी आन्दोलनका अग्रज दिपक प्रकाश बाँस्कोटाको अगुवाईमा एलाईन्स स्थापना भएको हो । सहकारी ऐन बनाउने एउटा महत्वपूर्ण खम्बा र अगुवा बाँस्कोटा हुन् । उहाँको अगुवाईमा शुरु भएको हो नेपालको सहकारी आन्दोलन । सहकारी विकास बोर्डको संस्थापक कार्यकारी अध्यक्ष, सहकारी संघको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्थ्याे । सहकारीमा राजनीति गर्न हुँदैन भन्ने व्यक्ति बाँस्कोटा थिए । संघको अध्यक्ष हुँदा र अहिले पनि सबै मिलेर जानु पर्छ भन्ने पक्षमा उहाँ हुनुहुन्छ । यही कुरामा सबैलाई उहाँले प्रशय गर्नुभयो । सबै पार्टीका मानिसलाई मिलाएर लैजान पर्छ भन्ने सोच उहाँले राख्नुभयो ।
संघमा केशव वडाललाई पनि ल्याएर सल्लाहकार बनाउनुभयो । बाँस्कोटाकै प्रस्तावमा केशव बडाल अध्यक्ष पनि भए । वडाल संघको अध्यक्ष भैसकेपछि राजनीति करण शुरु भयो । बाँस्कोटा हुँदा फिटिक्कै राजनीति घुसेको थिएन । सबै मिलेर जानु पर्छ भन्ने बाँस्कोटाको कन्सेप्ट थियो । बडाल आएपछि एमाले लाई मात्र प्रोत्साहित गर्न थाल्नुभयो । उहाँले सबैलाई सोध्न थाल्नु भयो, तपाई कुन पार्टीको मान्छे ? संघका प्रतिनिधिहरु, जिल्लाका अध्यक्षहरु सबैलाई पार्टीको कुरा गर्न थाल्लनु भयो । उहाँले एमाले बन्नुस् तपाईलाई यो ठाउँमा पुर्याईदिन्छु भन्न थाल्नु भयो । सबै तिर उहाँले एमालेको मात्र प्यानल आउनु पर्छ है भनेर कार्यकर्ता तथा सहकारीकर्मीलाई निर्देशन दिन थाल्नु भयो । त्यसपछि एमालेका कार्यकर्ता जता पनि एकलौटि ढंगले खट्न थाले । झोलामा भएका संघलाई पनि सदस्यता दिइयो । संघ खोलेरै भएपनि अनि बहुमत ल्याउने काम गर्नुभयो । सबै तिर एकलौटी ढंगले चल्न खोजी सकेपछि यसलाई त्यसरी छोड्न हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी लाग्यौं । सशक्त रुपमा एकिकृत हुनु पर्यो भनेर सबैमा सर सल्लाह गर्र्यौ । हामीले पार्टीका नेतालाई भेट्दा पनि उनीहरुले सहकारीमा राजनीति गर्न हुँदैन मात्रै भन्नुभयो । हाम्रो कुरा सुन्नु भएन । सहकारी त काँग्रेसकै त हो नि ? कांग्रेसले ल्याएको अवधारणा हो । सबैलाई मिलाएर लैजानु पर्छ भनेर मात्र भन्नु भयो । सहकारी विपि कोइरालाले ल्याएको अवधारणा हो । सबैलाई मिलाएर लैजानु पर्छ भन्ने कुरा आयो । पार्टीका नेताले यति भनिसकेपछि सबैलाई समेट्ने फोरमको महशुस गर्र्यौ ।
त्यसपछि नेशनल को-अपरेटर्स ‍एलाईन्स जन्माएका हौं । विभिन्न संघहरुमा राजनीति गर्नबाट रोक्नु पर्छ र सबै ठाँउहरुमा प्रजातन्त्र वादीको पनि वर्चस्व कायम गर्नुपर्छ र सबै एकै ठाउँमा हुनु पर्छ भनेर एलईन्सको स्थापना गरेका हौं ।
हाल यसको संगठन विस्तार हुँदै गएको छ । उनीहरु संग डाइलग गर्न पनि सजिलो भएको छ । अहिले केही विषयमा वार्ता गर्नु पर्यो भनेपनि एलायईन्स संग गर्नुपर्छ । कहि कतै प्रतिनिधि पठाउनु पर्यो भने पनि एलायन्सले पठाउने हो । अहिले संघमा ओमदेवी मल्ल लगायतका केही नेतालाई पनि एलाईन्सले नै पठाएको हो ।
हामीले आफ्नै तरिकाले अगाडी बढाउन खोजि रहेका छौं । यो डेमोक्रेट अर्गनाइजेशन हो । हाल ४६ जिल्लामा शाखा विस्तार भएको छ । जिल्लाका हरेक क्षेत्रमा क्षेत्रिय समिति पनि गठन भएका छन् । एलाईन्समा सदस्य बन्न सहकारी संघ संस्थाको पदाधिकारी भएको व्यक्ति मात्र हुन पाउँछ । सदस्यता निकै बृद्धि भईरहेको छ । केही समय अघि मात्र केन्द्रीय महाधिवेश गर्र्यौ । सबैलाई संगठित गराउने र संगठित गराईसकेपछि यसैको माध्यमले सहकारीको बारेमा कहाँ के अप्ठ्यारो छ ति कुराहरुको लवि गर्ने हाम्रो काम हुनेछ । कहाँ के समस्या छ, त्यसको समाधानका लागि हामी लवि गर्छौ । ऐन, नियमावली, मापदण्डका बारेमा एलाईन्सले आवाज उठाउँदै आएको छ । कांग्रेसका नजिक भएका व्यक्तिहरुले यसको सदस्यता लिएका छन् । जिल्ला जिल्लामा त प्रजातन्त्र वादी साथीहरुले पनि सदस्यता लिएका छन् । संगठनलाई बलीयो बनाउन लागि रहेका छौं । ७५ वटै जिल्लामा संगठन बनाउने अभियानमा छौं । २।३ वटा जिल्लामा खासै सहकारीको उपस्थिति छैन । ति जिल्लामा विस्तारै संगठन विस्तार हुन्छ ।
एलाईन्स सहकारीको क्षेत्रमा क्रियाशिल संगठन हो । यो भित्र डेमेक्रेट साथीहरु होलान् । सहकारी क्षेत्रमा परेको हरेक समस्यालाई समाधान गर्ने, त्यसको लवि गर्ने हो । संघहरु एकलौटि हिसाबले हिडेको र हाम्रा साथीलाई मर्का परेका कारण यसमा एकजुट भएका हौं । एकजुट भएपछि साथीहरु उत्साहित भएका छन् । जहाँ सुकै राम्रा व्यक्ति, राम्रा संस्था चलाएका व्यक्ति डेमोक्रेटनै हुन् । सहकारीको गतिलो फोरमाको रुपमा एलाईन्स विकास हुन्छ । एलायन्सको काम लवि र एडभोकेट मात्र नभई शिक्षा, तालिम दिने पनि काम गर्छ । सबै संग समन्वय गरेर गोष्ठि, सेमिनार गर्छ । एलाईन्स नेपाली कांग्रेसको सुभेच्छुक संस्थाको रुपमा रहने छ । शुभेच्छुक संस्थामा पार्टीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन र काँग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले त्यो गर्दा पनि गर्दैन । शुभेच्छुक संस्थाको रूपमा रहँदा पार्टीले हाम्रो सुझावलाई आधिकारिकता दिन्छ, नरहँदा त्यो नहुन पनि सक्छ । सहकारीको पार्टीको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ जसरी हामीले अन्य पार्टीको प्रभाव सहकारीमा देखि राखेका छौँ । तसर्थ पनि हामी नेपाली काँग्रेस पार्टीको शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा रहेर सहकारीका विषयमा नेपाली काँग्रेसले सहकारीका विकासका लागि अझ बढि चासो देओस् भन्ने चाहन्छौँ ।
एलाईन्स अघि बढ्दा काेही कसैलाई घाटा पर्दैन । सबैलाई फाइदा पुग्छ । हामी एकलौटी गर्दैनौ । सबैलाई समेटेर लैजान तयार छौं । सहकारीका पहुँच विस्तार, अन्तराष्टिय स्तरमा समेत सहकारीलाई स्थापित गराउने यसले काम गर्छ । सहकारी नजानेर समस्यामा पारेका छन् । तिनिहरुलाई सही निर्देशन पनि हामी दिन्छौं । सहकारी पनि सफल रुपमा संचालन गर्न सक्नु पर्छ । संस्थालाई व्यवसायी रुपमा चलाउनु पर्छ भनेर हामी लागेका छौं । सहकारी संस्थामा हामी राजनीति छिर्न दिदैनौं । कुनै एक पार्टीको सुभेच्छुक संस्था भएपनि सहकारी संघहरुमा देखिएको राजनीतिलाई चिर्नको लागि एलाईन्स स्थापना भएको हो । सहकारी आन्दोलनलाई बलीयो बनाउने पर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । सबै मिलेर जान सके मात्र सहकारी आन्दोलन बलीयो हुन्छ ।
हाल सहकारीमा एकलौटी प्रवृति देखिएको छ । त्यसलाई चिरेर अघि बढेमात्र सहकारी अभियानले गति लिन्छ । उहाँहरु आउनु हुन्छ, भने एलाईन्सको तर्फबाट वार्ता र सहमती गर्न तयार छौं । यो संगठन भित्र कसैले नराम्रो काम गर्नु हुँदैन । हरेक संघ/संस्थाहरु नीति र विधि संवत हिसाबले अघि बढ्नु पर्छ । ऐन, नियम अनुसार चल्लनु पर्छ । पारदर्शी हुनुपर्छ । संस्थाहरु राम्रो संग चल्नु पर्छ । यसमा आवद्ध भएका साथीहरुको संस्था राम्रो छ भनेर देखाउनु पनि पर्छ । यही अनुरुप हामीले संस्थालाई निर्देशन पनि दिएका छौं । राज्यलाई कर तिर्ने देखि लिएर नीति नियमले तोकेका काम सबै गर्नुपर्छ । जब राज्यबाट कानुन बनेर आइसकेपछि कानुन मान्दिन भन्नु मिल्दैन । भोली कानुन संशोधन गरौंला । यस विषयमा एलाईन्सले आवाज उठाउने छ । यसैकाे लागि हाे एलाईन्स ।
(सहकारीखबर डटकमका कार्यकारी सम्पादक काजी श्रेष्ठ संगको कुराकानीमा आधारित)
गाेबिन्द जी नेशनल काेअपरेटिभ फेडेरेशन र एलायन्सकाे बिचकाे फरक त बताउनु नपर्ला । दिपक बाँस्काेटाका गुण र दाेष दुवै भए झैं अरू नेताका पनि हाेलान् । निष्पक्ष भएर लेखे उचित हाेला कि ?